Famerenana ny fandaharam-potoana: Fitaovana fampiasana tranonkala izay afaka manampy anao tokoa
Fantatsika fa sarotra ny tranokala teknika izay mitarika ny famahanana sy ny famoahana vaovao avy amin'ny tranonkala isan-karazany. Ny ankamaroan'ny orinasa dia miankina amin'ny angon-drakitra, ary ny fitaovana maotina amin'ny tranokala tsotra dia afaka mamaha olana samihafa momba ny angon-drakitra izay manome antsika votoatim-pampandrosoana sy ilaina.
Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana fandoroana tranokala dia mora ampiasaina ary afaka mamoaka angon-drakitra marina ao anatin'ny segondra vitsivitsy. Ny sasany amin'ireo safidy dia maimaim-poana, fa ny hafa kosa aloa - vacuum ejector calculation. Miankina amin'ny toetrany, ny safidy ary ny fampitana azy ireo ny fitaovana fandinganana tranonkala. Ny sasany amin'izy ireo dia mitaky ny code saingy ny hafa dia tsy mitaky anao hanana fahaizana momba ny programa.
2. Na dia misy aza ny fananganana antontam-baovao maromaro na fikolokoloana tetikasan-tserasera amin'ny Internet, Agenty dia hanao asa maro ho anao. Amin'ny fampiasana an'io fitaovana io, dia afaka manamboatra asa isan-karazany ianao amin'ny farany ary manangona be dia be. Izy io dia manome antsika ny angon-drakitra voasoritra ao amin'ny JSON, TSV sy CSV format ary mampiasa API mba hanamora ny fanangonana angon-drakitra amin'ny fiteny iray fandaharana amin'ny safidinao. Ny andiany maimaim-poana dia manana safidy be dia be, ka azonao atao ny mampiasa ny volavolam-bola vita amin'ny vola antoka.
CloudScrape dia fitaovana maimaim-poana amin'ny tranonkala hafa izay manohana ny angon-drakitra betsaka ary tsy mitaky download. Ity rindrambaiko mifototra amin'ny rindrambaiko ity dia afaka mametraka mora foana ny mpikirakira azy ary mamoaka angon-drakitra ho anao. Afaka mamonjy ireo angon-drakitra ao amin'ny Google Drive sy Box ianao aorian'izay. net na entana tahaka ny CSV sy JSON.
Datahut dia fitaovana maimaim-poana sy mavesatra ary entina hahazoana data ho an'ny data rehetra ho an'ny filanao rehetra. Azonao atao ny mahazo ny fampahafantarana marina amin'ny vidiny mora sy ny antoka 100% amin'ny vola. Tokony hotadidinao fa tsy misy dikan-teny maimaim-poana amin'ny Datahut, saingy ny dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-drakitra voalohany dia fividianana vola ary mety ho an'ny orinasa na orinasa efa miorina. Mampifandray ny angona avy amin'ny tranonkala maro izy ary manangona vokatra, votoatiny, sary ary profiles ho anao.
Webhouse. io dia fampiharana aterineto izay manome fahatongavana mivantana sy mora ho an'ny tahirin-javatra voajanahary ary mampiasa teknolojia iray mikorontana amin'ny Internet mba hanatanterahana asa maro samihafa. Manana ny fahafahana mandanjalanja ny tranokalanao izy ary mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala samihafa amin'ny fiteny 200 mahery. Manohana ny raki-tsoratra RSS, JSON, HTML ary XML izy io.
Ny iray amin'ireo fitaovana maoderina farany indrindra dia ny Fivetran. Fitaovana mahery vaika sy azo itokisana izy io ary mamonjy ny herinao sy ny fotoana. Amin'ny fotoana iray, ny Fivetran dia afaka mahazo pejy 100 ka hatramin'ny 100000 tsy misy olana.